AbakwaSamsung bathengise ama-Gear VR ayizigidi ezinhlanu Izindaba zamagajethi
AbakwaSamsung bathengise ama-Gear VR ayizigidi ezi-5
Unyaka esiwuqedile, kube unyaka lapho iqiniso langempela liqale khona, iqiniso langempela elivela esandleni se-Oculus ne-HTC. Amanani ala madivayisi, ngokuba amamodeli okuqala ezentengiso atholakala emakethe, akuzona ezishibhile ncamashi. Kepha futhi zidinga imishini enamandla athe xaxa kunokujwayelekile, ngakho-ke uma sifuna ukubeka amakhanda ethu ngalobu buchwepheshe obusha, kuzofanele ukuthi, ngaphezu kokuthenga imishini, sizitholele iqembu elinamandla anele okuhambisa imidlalo etholakalayo namuhla.
Kepha akudingekile ukuthi sitshale imali enkulu uma sifuna ukuqala ukunikeza amaphayini okuqala kulolu hlobo lweqiniso langempela. Njengamanje emakethe singathola isibalo esikhulu sezibuko, okufaka kuso i-smartphone, singajabulela amavidiyo angama-360-degree, akuyona imidlalo, kepha qala ukubona amathuba alobu buchwepheshe ayisiqalo.
Phakathi kwazo zonke izibuko ezitholakala emakethe, abakwaSamsung yibona abasinikeza imodeli, iGear VR enezici ezinkulu, yize kunengqondo ukuthi, iyahambisana kuphela namamodeli wakamuva womenzi waseKorea. AbakwaSamsung basanda kumemezela ohlakeni lwe-Consumer Electronic Show olubanjelwe eLas Vegas, ukuthi inani lezibuko ezingokoqobo ezibekwe yinkampani emakethe lifinyelela ezigidini ezinhlanu Okwezinyunithi.
Lezi zibalo zingahlanekezelwaNjengoba njalo lapho inkampani yethula idivayisi entsha, esikhathini sokubhuka, imvamisa inikeza iGear VR mahhala kubasebenzisi bokuqala abagcina le divayisi. Ngokuhamba kwesikhathi futhi njengoba intengo yalolu hlobo lwedivayisi yehla, okungama-euro angama-100, lolu hlobo lwezibuko luzoba usuku nosuku lwezigidi eziningi zabasebenzisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ubuchwepheshe » Iqiniso langempela » AbakwaSamsung bathengise ama-Gear VR ayizigidi ezi-5
I-CES iyaphela manje iMobile World Congress yeBarcelona 2017 isondela
I-Samsung Galaxy S8, ingathulwa ngo-Ephreli 18